Faa'iidooyinka E-mayllada Kiciyay | Martech Zone
Faa'iidooyinka Emails-ka Kiciyay
Arbacada, Nofeembar 20, 2013 Arbacada, Nofeembar 20, 2013 Douglas Karr
E-mayllada ayaa sida caadiga ah loo adeegsadaa suuq geynta waana fariin hal-to-badan ah. Warshadaha dhexdooda, tan waxaa si wanaagsan loogu yaqaannaa Dufcaddii iyo qarax. Waqtiga ayaa leh cidda soo dirtay. Iimaylka la kiciyay wuu ka duwan yahay, isku darka sheybaarka gaarka ah iyo xogta isticmaalaha si loo soo diro farriin emayl marka dhacdo gaar ahi dhacdo. Dhacdadii kicin emaylka. Emailada kicinta waxaa si toos ah loogu diraa nidaamka gadaal ama adeegsiga adeeg bixiyaha emaylka sida caadiga ah iyada oo loo marayo an API is-dhexgalka.
Nidaamyada otomatiga suuqgeynta qaarkood sida macmiilkayaga, Xaqiiqda Isdhexgalka, Waxaad siisaa fursado aad ku naqshadeyso isku xigxigga dhammaan farriimaha kiciya si dadka aad ugu celiso bartaada. In kasta oo ololeyaasha farriinta kiciya ay inta badan si gaar ah loo habeeyay oo isku dhafan yihiin, faa'iidooyinka ayaa aad u badan. Maaddaama ay caadi ahaan u dhacaan dhacdo awgeed - waxaa loo diri karaa iyaga oo tilmaamaya waqtiga saxda ah iyo saxnaanta si ay u gaaraan qofka waqtiga saxda ah, farriinta saxda ah, waqtiga saxda ah. Tan macnaheedu waa wanaajinta heerarka beddelashada iyo khibradaha macaamiisha oo hagaagay.
Suubbanada Emailka waxay la yimaadaan an infographic xiiso leh oo ku saabsan emayllada kiciyay. Iyagu waa dad waa weyn - kaliya waxay naga caawinayaan inaan qaabeyno qaar ka mid ah qaabab qurxoon, jawaabo u leh Wareeg Press. Dhagsii bogga Infographic si aad u aragto sawir buuxa oo is-dhexgal ah!
Tags: emaylka iswadaemayl apibeddelka emaylkaka jawaab celinta emaylkaemayl kiciyay
Lacagta Bulshada: Abaal mari Macaamiishaada Markay Wax Wadaagaan
Sare u kaca ganacsiga mobilada, iyo waxtarka ay u leeyihiin suuqleyda